जीवन बीमा उपसुचक मात्र बढ्नुको यस्तो छ कारण, हेरौ आजको बजार बिश्लेषण - नेपालबहस
जनप्रतिनिधि हुनु त रोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौला जस्तो !
आजको मौसम : कहि मेघगर्जनसहित बर्षा कतै हिमपात
जीवन बीमा उपसुचक मात्र बढ्नुको यस्तो छ कारण, हेरौ आजको बजार बिश्लेषण
माघ ८, काठमान्डौ: साताको चौथो कारोवार दिन बजारमा बिक्रीकर्ता नै हावी देखिएका छन् । आज नेप्से परिसुचकमा ७ दशमलव ०५ अंकको गिरावट देखिएको छ । नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ५३ अंकले घटेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको ६१ करोड १२ लाखको शेयर कारोवार भएसंगै कारोवार रकम १ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । आज ४९ लाख १४ हजार कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको छ । आज दोश्रो बजार १३१३ दशमलव ४२ को अंकमा बन्द भएको छ।
आज जीवन बीमा कम्पनीहरुको उपसुचक बाहेक सम्पूर्ण उपसूचकमा गिरावट देखिएको छ । आज जीवन बीमा कम्पनीहरुको उपसुचकमा २ दशमलव ३२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांस प्रस्ताव नगरेकोमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको शेयरमा लगानीकर्ताले खरिद गर्न आक्रामक भएको देखिन्छ।
आज हाईड्रोपावर कम्पनीहरुको उपसूचकमा सर्वाधिक १ दशमलव ५३ प्रतिशत घटेको छ। बजारलाई ड्राईभ गर्ने वाणिज्य बैंकको उपसुचकमा पनि शुन्य दशमलव ७४ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ।
बजार १३२४ दशमलव ३२ को विन्दुमा खुलेको थियो । बजारले ११ बजेर ०९ मिनेटमा १३२५ दशमलव ७० को उच्च विन्दु सम्म पुगेकोमा १२ बजेर १५ मिनेटमा बजारले १३१० दशमलव ६५ को न्यून विन्दु समातेको थियो । बजारमा अन्तिम १५ मिनेटमा भने बिक्री चाप आएको थियो ।
आज ग्लोबल आईएमई बैंकको सर्वाधिक ६१ करोड १२ लाखको शेयर खरिदबिक्री हुँदा एसियन लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक ८ दशमलव ४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पाँचथर पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक ८ दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपाल बैंकको रु नौ करोड नौ लाख ३१ हजार १८५, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु सात करोड ६९ लाख नौ हजार २३४, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु पाँच करोड ८३ लाख ६७ हजार ३५३, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु पाँच करोड ८१ लाख ७१ हजार ५७९, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु पाँच करोड ४१ लाख २७ हजार ११२ र एनआइसी एसिया बैंकको रु दुई करोड ९५ लाख ७७ हजार ४८८ मा खरिदबिक्री भएकाे छ ।
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका शेयरधनीले सबैभन्दा बढी ८.४७ प्रतिशतले कमाए । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ८.२०, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ५.२४, सिर्जना फाइनान्स ३.९६, सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड ३.९३ र ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम–१ का लगानीकर्ताले ३.९१ प्रतिशतले कमाएका छन् ।
त्यस्तै सबैभन्दा बढी पाँचथर पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ८.६९ प्रतिशतले गुमाए । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैङक ७.५१, सेन्ट्रल फाइनान्स ७.२३, नविल इक्विटी फण्ड ५.२९, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट ५ र स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ४.९९ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
प्राविधिक बिश्लेषण :
मुख्य प्रतिरोध : १३२५ पहिलो टेवा: १३०८
हाल बजारले १३५९ को उच्च बिन्दु बनाए पछि बजार सच्चि रहेको देखिन्छ। आज नेप्से परिसूचक १३१३ दशमलब ४२ को बिन्दुमा बन्द भएको छ ।
आज नेप्सेले “वियरिस” मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ। यसले आज बजारमा आपूर्ती बढी रहेको जनाउँदछ ।
दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ७३ दशमलब ५७ को बिन्दुमा छ। हालसम्म आरएसआईको प्रवृत्तिले बजारमा शेयर बढी खरिद भएको जानकारी गराएको छ ।
“एडिएक्स” ले बजारमा हालसम्म क्रेताको चाप रहेको जानकारी गराएको छ भने जोड र बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले क्रेताको चाप हुन थालेको जानकारी गराएको छ ।
“अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले विक्रेताको चाप हुने सम्भावना जानकारी गरेको छ ।
नेप्से बढेमा पहिलो प्रतिरोध १३२५ को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ र घटेमा पहिलो टेवा १३०८ को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ ।
अघिल्लो लेखसुरक्षा दिन सरकार असफल
अर्को लेखमाछापुच्छ्रे क्यापिटलले पायो कारोबारको अनुमति
अलैँची मूल्यमा भारी गिरावट, व्यवसायी भारतको बजारमा निर्भर
पाँच अंकले बढेकाे बजारमा कमाउने १० ठूला कम्पनी कुन-कुन हुन् ? हेराैं आजकाे बजार काराेबार
शेयरबजारको आजको बृद्धि यसकारण छ सकारात्मक, अबको गन्तब्यमा कहाँ निर छ अवरोध ?
बीमाका लगानीकर्ता मालामाल, अबको बाटो के ? हेरौ बजारको टेवा र प्रतिरोध
सिभिल बैंकको वित्तीय अवस्था नाजुक, अस्वाभाविक खर्च वृद्धि हुँदा लगानीकर्ता जिल्ल
छ महिनामा मुनाफा घटाउने बाणिज्य बैंक चिनाैं